Maxaa kasoo baxay kulankii dhexmaray Madaxweyne Deni iyo Ganacsatada Puntland ? (Sawirro) – Idil News
Maxaa kasoo baxay kulankii dhexmaray Madaxweyne Deni iyo Ganacsatada Puntland ? (Sawirro)
Garoowe : 16 June 2021: Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa caawa kulan casho ah la yeeshay Ganacsatada Puntland.
Madaxweynaha ayaa la wadaagay ganacsatada horumarka dalka ka socda iyo guulaha dowladdu ka gaartay dhinacyada Amniga, Dimuqraadiyadda, Kaabayaasha dhaqaalaha , Arrimaha Bulshada iyo Tayeynta Hay’addaha Dowladda. Wuxuuna ku booriyay in ay iyana doorkooda ka qaataan.
Ganacsatada ayaa Madaxweynaha uga mahadceliyay Shaqada wanaagsan ee socota iyo isbedelka dhabta ah ee muuqda. Waxayna la wadaageen Madaxweynaha inay diyaar u yihiin wixii doorkooda ah inay sii laba jibaaraan ka qeyb qaadashada horumarka.